isina-partition tank mhando yakanyanya kushanda firita
l hapana leakage firita inogona kuiswa nekuda kwekushandisa kweakakosha gel-senge yekuisa chisimbiso zvinhu.
partiton pleat yakakwirira kunyatsoshanda kugona HEPA firita yemagetsi yakachena mukamuri yemishonga yemitambo
Sefa inotora yakanyanya-yakanaka girazi fiber pepa sechinhu chisina kugadzirwa, uye rinogadzirisa bepa seyakaganhurana bhodhi, ichiumba neakakurudzira bhokisi, aluminium chiwanikwa, uye glue. Ichi chigadzirwa chine maficha ekukwirira kusefa kwefirita, kushomeka kushoma, guruva rakakura rekukwanisa kugona uye mutengo wehupfumi. Inoshandiswa zvakanyanya pakupera kwemhepo kunatsa kweanowanzo mweya-kutonhodza system, mweya yekuchenesa system uye pfapfaidzo nyowani yemhepo yekupa system. Kazhinji, tembiricha iri mukati isingasviki 60 degrees. Muganhu zvinhu kwakakurudzira bhokisi uye aruminiyamu furemu.
V- yakaumbwa nemhando yepamusoro firita
V-yakaumbwa dhizaini ine yakanyanya mini pleat firita, ine yakawanda firita nzvimbo kupfuura yechinyakare firita. Yakakura firita nzvimbo inogona kubata yakakura mweya vhoriyamu, chengetedza yakaderera kumanikidza kurasikirwa uye kuwedzera basa rebasa resafa. Firita zvinhu
yakanyanya kushanda kuburitsa pamwe nekuparadzanisa hapana kugovera mhepo yekubuda
Inoshandiswa zvakanyanya mukupa mhepo panopera yakachena chirimwa, senge: mishonga, zvekurapa, zvekudya, zvemagetsi, chaiyo yekupfeka uye mamwe maindasitiri.
Zvigadzirwa zvinoshandisa mechanical compression, uye bhokisi zvinhu zviri GB inotonhora yakakungurutswa ndiro.
Bhokisi repamusoro kurapwa rinotora phosphating pfapfaidzo, ine yakasimba ngura kuramba.
FL akateedzana yakakwira tembiricha yemhepo firita inoshandisa ultrafine girazi faibha sefaira bepa, aruminiyamu foil separadzanisa, uye simbi isina simbi sefuremu. Yakavharwa uye yakarongedzwa neinotengeswa yakakwira tembiricha rabha. Sefa yega yega yapfuura kuyedza kwakasimba nehurefu hwekusefa, kushomeka kwakadzika, guruva rakakura rekubata chinzvimbo, uye yakanyanya kupisa tembiricha Zviri kunyanya kune yakanyanya-tembiricha mweya yekuchenesa michina uye masisitimu anoda akakwirira ekunamatira ekugadzira mitsara yakadai sekuomesa
partition svikiro kunyatsoshanda Sefa
Sefa inotora L-yakaumbwa wavy partition. Mushure mekuumba, ine yakakwira filtration kunyatsoshanda, huru guruva inobata chinzvimbo, yakakwira firita yemhepo vhoriyamu uye zvimwe zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya pakupera kwemhepo kunatsa kweanowanzo mweya-kutonhodza system, mweya yekuchenesa system uye pfapfaidzo nyowani yemhepo yekupa system. Iyo yakajairika ambient tembiricha yekushandisa iri pasi pe80 degrees. Muganhu zvinhu kwakakurudzira furemu, aruminiyamu furemu, uye Stainless simbi furemu.